Waa maxay faa'iidooyinka CBD? | Xulashada Caafimaadka ee ugu Fiican 2020
Faa'iidooyinka saliida CBD
Faa'iidooyin Dhowr ah oo Saliid CBD ah oo ay Cadeeyeen
Cannabidiol ama CBD sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan waa walax caan ah maalmahan. Faa'iidooyinka https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ waxay u badan yihiin xanuuno badan oo caadi ah. CBD waa mid ka mid ah in ka badan 100 cannabinoids oo laga helay Dhirta xashiishadda sativa.
Tetrahydrocannabinol (THC) waa cannabinoid -ka ugu weyn ee nafsiyan laga helo xashiishadda, waa qaybta ugu weyn ee marijuana waxayna keentaa dareenka inuu "sarreeyo". Si ka duwan THC, CBD ma aha mid nafsiyadeed. Sifadani waxay CBD ka dhigaysaa ikhtiyaar soo jiidasho leh kuwa raadinaya gargaar iyada oo aan saamayn maskaxda-baddalka marijuana. Saliidda CBD waxaa lagu sameeyaa iyada oo laga soo saaro CBD dhirta cannabis, ka dibna lagu milo saliid side sida qumbaha ama saliidda abuurka hemp.
CBD waxay yareysaa xanuunka: Jirka bini'aadamka, waxaa jira nidaam la yiraahdo nidaamka Endocannabinoid, kaas oo nidaamiya shaqooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin rabitaanka cuntada, hurdada, iyo jawaabta nidaamka difaaca. Jidhku wuxuu soo saaraa neurotransmitters -ka loo yaqaan endocannabinoids oo ku xiran soo -dhoweeyeyaasha cannabinoid ee nidaamka dareemayaasha. Sida laga soo xigtay cilmibaarista, CBD waxay gacan ka geysaneysaa yareynta xanuunka daba -dheeraada iyadoo saameyn ku yeelanaysa waxqabadka soo -dhoweeyeyaasha endocannabinoid ee yareynaya bararka iyo la falgalka dareemayaasha gudbiya.
CBD waxay yareyn kartaa walaaca iyo niyad -jabka: Welwelka iyo niyad -jabka waxaa badanaa lagu daaweeyaa daawooyin, kuwaas oo sababi kara dhowr waxyeelo oo ay ka mid yihiin kacsanaan, lulmo, cillad galmo, hurdo la'aan, iyo madax -xanuun. Waxaa suurtogal ah in https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ saliiddu ay daaweyn u noqon karto welwelka iyo niyad-jabka labadaba, taasoo siinaysa kuwa la nool xanuunnadan fursad ay ku helaan xal dabiici ah. CBD xitaa waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo hurdo la’aanta iyo PTSD. Faa'iidooyinkaas saliidda CBD waxay ku xiran tahay awoodda CBD ee ku -shaqaynta soo -dhoweeyeyaasha serotonin, neurotransmitter -ka xakameeya niyadda iyo dhaqanka bulshada.
CBD waxaa laga yaabaa inay leedahay astaamo neerfaha: Saynisyahannadu waxay rumeysan yihiin in mid ka mid ah faa'iidooyinka saliidda CBD ay tahay in awoodda wax -ku -oolnimada nidaamka endocannabinoid ay faa'iido u yeelan karto dadka qaba cudurrada neerfaha. Dhab ahaantii, mid ka mid ah isticmaalka ugu badan ee loo isticmaalo CBD ee daaweynta cudurrada neerfaha sida suuxdinta iyo sclerosis badan. In kasta oo daraasadaha arimahan ay yihiin kuwo cusub, haddana dhowr daraasadood ayaa muujiyey natiijooyin rajo leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xuso in dadka qaarkood daraasaddan ay la kulmeen saamayn labaad oo la xiriirta Daaweynta CBD, sida qandho, daal, iyo gariir. CBD iyo Delta 8 THC Bulk ayaa sidoo kale loo baaray hantidooda suurtagalka ah ee daaweynta dhowr cudur oo kale oo neerfaha ah.
CBD waxay yareyn kartaa astaamaha la xiriira kansarka: Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu badan ee la isku haysto ee saliidda CBD ayaa ah inay ka caawin karto astaamaha la xiriira kansarka. Waxa hubaal ah, in kasta oo CBD ay ka caawin karto dadka qaba kansarka inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka soo raaca ee la xiriira daaweynta kansarka, sida lallabbo, dawakhaad, iyo xanuun. Waxaa la sheegay in CBD ay lahaan karto guryaha kansarka la dagaallama. Si kastaba ha ahaatee, weli wax caddayn ah looma hayo. Cilmi -baaris dheeraad ah ayaa loo baahan doonaa si loo caddeeyo waxtarkeeda.
CBD waxay kaa caawin kartaa yareynta finanka: Finanka waa xaalad maqaar oo saameysa qiyaastii 10% dadweynaha. Waxaa sababa arrimo kala duwan, bakteeriya, barar maqaarka, wax -soo -saarka sebum -ka, iyo xitaa hidde -sidayaasha. Sida laga soo xigtay cilmi-baaristii sayniska ee dhowaan, mid ka mid ah faa'iidooyinka saliidda CBD ayaa ah inay gacan ka geysan karto daaweynta finanka sababta oo ah astaamaha ka-hortagga bararka iyo awoodda lagu yareeyo wax-soo-saarka sebum-ka.
CBD waxay faa'iido u yeelan kartaa Caafimaadka Wadnaha: Daraasadihii ugu dambeeyay waxay ku xireen CBD faa'iidooyin dhowr ah oo loogu talagalay wadnaha iyo nidaamka wareegga dhiigga, oo ay kujirto awoodda lagu yareeyo cadaadiska dhiigga. Cadaadiska dhiigga oo sarreeya wuxuu la xiriiraa khataraha sare ee xaaladaha wadnaha, oo ay ku jiraan istaroogga iyo wadne -istaagga. Cilmi -baaristu waxay tilmaamaysaa in CBD laga yaabo inay ka caawiso dhiig -karka.
Faa'iidooyinka kale ee suurtagalka ah ee Saliidda CBD: In kasta oo cilmi baaris dheeraad ah loo baahan yahay, haddana CBD ayaa laga yaabaa inay bixiso faa'iidooyin kale.
Daaweynta ka -hortagga ku -xadgudubka mukhaadaraadka: CBD waxaa loo maleynayaa inay wax ka beddeleyso wareegyada maskaxda ee la xiriira qabatinka maandooriyaha.
Saamaynta dhimirka CBD waxaa laga yaabaa inay caawiso dadka qaba shisoofrani iyo jirrooyinka kale ee maskaxda waxayna yareeyaan astaamaha maskaxda.
Ka -hortagga sonkorowga: Daraasadaha jiirarka, CBD waxay hoos u dhigtay dhacdooyinka sonkorowga in ka badan 50%.
Nextpost Next:CBD iyo Sonkorowga - Isticmaalka Saliidda CBD si loo dheellitiro Sonkorta Dhiigga | Waxsoosaarka ugu fiican 2021